Mini Innovation Challenge
Mini Innovation Challenge is an innovative competitation which is brought to you by USAID and UTYCC, and organized by Student Union, UTYCC. This competition is held as an initiating point to solve the problems from the environment in the fields of education, economics and sociaty by applying the creativity and talents of the students. The competitors have to participate this competitation on the weekends staring from Dec15 to Dec30. For three weekends, there are three challenge levels. To complete those levels, the competitors have to find the solution, solve and create based on the need statements.
1st Week #Ice Breaking On the first day of the first week, the competition will be started with some fun activities to create more friendships and to be close to each other between the competitors. Then the competitors have to choose Need Statments and start the "Team Formation". We will provide mentors for the respective Need Statements. On the first weekend, the competitors have to make "Project Prototype" that can solve the chosen Need Statement and then give "Presentation" for it.
2nd week #The invention In the second week, the competitors have to do brainstroming to build and invent on the project prototype they've created already. During invention, microcontrollers, sensors, 3D printer, and so on, will be allowed. Based on the surveys and resources of the respective team, the competitors have to approch and invent to get the possible solution.
3rd Week #the goal In the third week (final week), the competitors will get the suggestions from the Judges, professionals and teachers for the solutions which are invented according to need statements. A3minutes presentation video must beaplus in showing the project. Based on the team work, creative skills, possible solutions and the outcome results from the three levels, the first, second, and third prizes will be deservedly awarded.
Registration : Dec3 to Dec10, 2018.
Entry Lists Announcement: Dec13, 2018
1st weekend: Dec15-16, 2018
2nd weekend: Dec 22-23, 2018
3rd weekend: Dec 29-30, 2018
1st prize :3lakh
2nd prize:2lakh
3rd prize: 1 lakh
All the students from "second year" to "final" can participate. But, if there are above 50 participants, the students have to sit for the "Entrance Exam".Mini Innovation Challenge
Mini Innovation Challengeဆိုတာ USAIDနှင့် နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( ရတနာပုံ ဆိုင်ဘာစီးတီး ) တို့မှ ဦးဆောင်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီး နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( ရတနာပုံ ဆိုင်ဘာစီးတီး ) ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂမှ Organizer အဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့် တီထွင်ဖန်တီးမှုစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲလေး ဖြစ်ပါတယ်. . .
ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများ၏ ဖန်တီးမှုစွမ်းရည်များအား အခြေပြု၍ လက်တွေ့ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးရာ ပြဿနာများအား တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင် ဖြေရှင်းနိုင်စေရန် လမ်းစ တစ်ခုအဖြစ် ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲကို Dec 15 ရက်နေ့မှစပြီး Dec 30 ရက်နေ့ထိ Weekend များတွင် ယှဉ်ပြိုင်သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်. . .
Weekend သုံးခုမှာ Challenge level (၃)ခုကို ယှဉ်ပြိုင်ရမည့် Problems/ Need Statementများပေါ်မူတည်၍ ကြိုးစား အဖြေရှာ ဖန်တီးသွားရမှာပါ. . .
ပထမအပတ်ရဲ့ ပထမရက်မှာတော့ ပြိုင်ပွဲများအချင်းချင်း ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိစေဖို့ Activities လေးတွေနဲ့ အစပြုပါမယ်။ ဆက်လက်ပြီး Need Statements များရွေးချယ်က Team Formation လုပ်ရပါမယ်။ သက်ဆိုင်ရာ Need Statements အလိုက် Mentors များသတ်မှတ်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမအပတ် Weekend မှာ မိမိတို့ ရွေးချယ်ထားတဲ့ Need Statementကို ဖြေရှင်းထားတဲ့ Project Prototypeကို ဖန်တီးပြုလုပ်ပြီး Presentation ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယအပတ်မှာတော့ မိမိတို့ ဖန်တီးထားတဲ့ Project Prototypeကို လက်တွေ့တည်ဆောက်ဖို့ brainstromingလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တီထွင်ရာမှာ Microcontrollers, sensors, 3D Printer စတာတွေကို အသုံးပြုခွင့်ရှိပါတယ်။ Team အလိုက် surveysများ resourcesများကို အခြေခံပြီး possible solution တစ်ခုရအောင် ချဉ်းကပ် တီထွင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲရဲ့ နောက်ဆုံးရက်သတ္တပတ်လည်းဖြစ်တဲ့ တတိယအပတ်မှာတော့
မိမိတို့ Team အလိုက် ဖန်တီးပုံဖော်ထားတဲ့ Need Statementအတွက် Solution ကို ဒိုင်လူကြီးများ ပြင်ပပညာရှင်များ ဆရာ/ဆရာမများထံမှ အကဲဖြတ် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ခံယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့ Projectကို တင်ပြရာတွင် ၃မိနစ်စာ Video presentationကိုလည်း ထည့်သွင်း ဖော်ပြရမှာပါ။
ရက်သတ္တပတ် သုံးပတ်တာ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့မှုရလဒ်များ Team work, Creative skills, possible solution များပေါ်မူတည်၍ ပထမဆု,ဒုတိယဆု, တတိယဆုများကို ထိုက်တန်စွာချီးမြင့်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Registration : Dec3to Dec10, 2018
Entry Lists Announcement: Dec 13, 2018
1st weekend : Dec 15-16, 2018
2nd Prize :2lakh
ဒုတိယနှစ်မှ Final ထိ ကျောင်းသား/သူများအားလုံးပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါတယ်။ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သူဦးရေ ၅၀နှင့်အထက် ရှိပါက Entrance exam ဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။